Home Wararka Ciidamada AMISOM ee ku sugan xerada Maslax oo xalay la weeraray
Ciidamada AMISOM ee ku sugan xerada Maslax oo xalay la weeraray
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar culus oo xalay xubno Shabaab ah ku qaadeen Saldhigga weyn ee Ciidamada AMISOM ku leeyihiin Xerada Maslax oo kutaalla Xaafada Suuqa Xoolaha degmada Hiliwaa ee Gobolka Banaadir.
Weerarka oo marka hore ku bilowday qoriga garabka laga rido ee Zabanka oo lagu dhuftay iridka laga galo xerada ayaa waxaa xigay dagaal fool ka fool ah, kaasoo la isu adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, iyadoo ku dhowaad saacad uu weerarka socday.
Ciidamo ka tirsan booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad oo fariisimo ku leh aagga weerarka uu ka dhacay ayaa la sheegay iney gurmad ahaan ugu tageen ciidanka Uganda ee Amisom qeybta ka ah, iyadoo kooxda weerarka qaaday ay markii danbe goobta isaga carartay, maadaama dhexda la gashtay oo xaaladda ay adkaatay.
Dadka deegaanka ayaa sheegay inuu jiro khasaare kala gaaray dhinacyada dagaalamay, walow aysan sheegi karin tirada rasmiga ah, xiliga weerarka oo habeen ahaa iyo dadka oo aan aad ugu dhawaan karin xerada Maslax ee ciidanka Amisom ay fariisinkooda labaad ee ugu weyn u ah ee ku yaala magaalada Muqdisho.
Majiro wax war ah oo duulaankii xalay ay ka soo saartay dowladda Soomaaliya iyo ciidanka Amisom, iyadoo degmooyinka Yaaqshiid, Hiliwaa iyo Deeyniile laga maqlayay dhawaqa rasaasta ay isku ridayeen labada dhinac.
Previous articleMaxkamadda CXD ee Puntland oo saaka xukun dil toogasho ah ku fulisay nin loo haystay dil
Next articleKenya: life sentence for driver implicated in kidnapping of two Cuban doctors
muxuu ku saabsan yahay safarka muuse Biixi ee Magaalada Dubai
Qabyaaladda Wasiir Oomaar & Cuna qabateynta uu ku hayo shirkadaha diyaaradaha...